इलाममा नयाँ भाडादर सार्वजनिक (कहाँबाट कति ? हेर्नुहास्) - Nayabulanda.com
इलाममा नयाँ भाडादर सार्वजनिक (कहाँबाट कति ? हेर्नुहास्)
नयाँ बुलन्द १५ कार्तिक २०७५, बिहीबार १८:०० 1640 पटक हेरिएको
इलाम : इलाममा नयाँ सवारी भाडादर सार्वजनिक गरिएको छ । यातायात व्यवस्थापन समितिको बैठकले १ सय ४३ रुटको नयाँ भाडादर ताकेर बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । समितिले जिल्लाका सडकको अवस्था, यसअघि तोकिएको भाडादर र विभागले तोकेको मापदण्डलाई आधार बनाएर नयाँ भाडादर निर्धारण भएको जनाएको छ ।
सदरमुकामको बसपार्कमा कार्यक्रम आयोजना गरी सदरमुकाम र विभिन्न स्थानबाट छुट्ने बस तथा जीपको नयाँ भाडादर सार्वजनिक गरिएको हो । सार्वजनिक गरिएको भाडादर अनुसार सवारी भाडा कतै बढाइएको छ भने कतै घटाइएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका पक्की सडकको भाडादर १० प्रतिशतसम्म बढाउन सक्ने निर्णय गरेपछि इलाममा पनि हेरफेर गरिएको हो ।
कहाँबाट कहा ? हेर्नुहोस् :